NgeBlackBerry Playbook, iBlackBerry Messenger (BBM) iyafumaneka njengenxalenye yeBlackBerry Bridge; xa uqhagamshela ngaphandle kweengcingo ithebhulethi yakho kwiBlackBerry smartphone, ungathumela kwaye ufumane imiyalezo ekhawulezileyo evela kwi-Playbook. Ukuqala iseshoni ye-BBM, kuya kufuneka ulandele la manyathelo ngokubanzi:
Yongeza umfowunelwa kwisixhobo sakho seBlackBerry.
Fumana imvume yaloo mntu yokunxibelelana.
kutheni ingono yam ibuhlungu
Kuya kufuneka uyazi enye yezi zinto zilandelayo ukuze usebenzise i-BBM:
Idilesi ye-imeyile enxulunyaniswa nesixhobo salo mntu
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-solu medrol
Thumela nokuba sisicelo ngePIN okanye ngesicelo ngomyalezo we-imeyile.
Ukuba bayasamkela isimemo sakho sokuncokola, inkonzo iyavunyelwa phakathi kwezi PIN zimbini.
Ukuhamba ngokubanzi kwe-BBM egudileyo zezi zilandelayo:
Ukuthumela umyalezo usebenzisa iBlackBerry Messenger, cofa igama kuluhlu lwabafowunelwa; emva koko ukhethe ucofe kuQala incoko. Chwetheza umyalezo kwaye ucofe u-Enter.
uyithatha njani i-amoxicillin
Ngexesha leseshoni ye-BBM, khetha Thumela ifayile okanye Thumela iNqaku leLizwi. Inqaku leNqaku leLizwi ngumsebenzi onomdla ekuvumela ukuba uqhube incoko yecala-nge-ixesha ukusuka naphina emhlabeni. Rekhoda umyalezo kwaye uwuthumele njengenqaku, uze ulinde elinye iqela lenze okufanayo.
Akufani ncam nokubiza umntu usebenzisa umsebenzi wefowuni we-smartphone, kodwa kwiindawo zamanye amazwe kubiza kakhulu okanye ngamanye amaxesha kusimahla (ngokwemiqathango yesicwangciso sakho sedatha).
Ukuphuma kwincoko (oku akuthethi ukuyiphelisa), cofa iqhosha lokubaleka. Oku kukuvumela ukuba uqhube ngaphezulu kweseshoni enye ye-BBM, unonxibelelwano olwahlukileyo, ngaxeshanye.
Ukuphelisa incoko, khetha kwaye ucofe Phelisa Incoko.
Ngaba i-insulin kufuneka ifrijiwe
amayeza asetyenziselwa ukunyanga i-schizophrenia
Ngaba i-tylenol ine-nsaids
I-acyclovir cream 5%
isikali esomileyo seentlungu
wabona i-palmetto idosi ecetyiswayo
ipilisi encinci eblue